Shirkii hogaamiyeyaasha Midowga Yurub oo maanta Göteborg ka furmay | Somaliska
Magaaladda Göteborg ee caasimadda labaad ee dalkaan Iswiidhan ayaa maanta waxaa ka furmay shir ay madaxda Midowga Yurub qaar kamid ah iskugu imanayaan. Shirkan oo arrimaha looga hadlayey ay aheyd xaquuqaha bulsho ee qaaradda, ayaa hadana warar horudhac ah oo shirkan quseeya ay sheegaya in hogaamiyeyaashu aan gaarin wax go’aan ah oo la xirriira tiiirarka aasaaska u ahaa Midowga Yurub.
Weriyeyaasha ku sugan goobta shirku ka dhacayo ee Eriksbergshallen ayaa soo sheegaya in lugu wado in madaxdu ay qalinka ku saxiixi doonto warqado ka kooban labaatan qodob oo arrimaha xaquuqaha bulsho ee qaaradda quseeya, islamarkaasina shirkani aannu u muuqan mid miisaan badan leh.
Shirkan ayaa waxaa bar bar socda dibaxyo aan badneyn oo ay dhowr soo abaabuleen kuwaas oo ay diidan yihiin shirkadan. Waxaa shirkani xagga ammanka booliska Iswiidhan xooga saareen inaanu qalalaase abuurin sidii kii ka dhacay magaaladda Göteborg sanadkii 2001-dii, markaas oo ay iska hor imaadyo ku dhex mareen booliska ammanka iyo dibadbaxayaal farro badan. Shirkaasi ayaa waxaa xilliggaa marti ku ahaa Bush-kii hore ee Mareykanka.
Goor dhow ayaa la filayaa in uu af jarmo shirkan ka socda Göteborg, iyadoo ra’iisal wasaaraha dalkaan Iswiidhan uu haatan ka hadlayo shir jaraa’id. Shabakada Somaliska.com ayaa wixii ka soo baxay shirkan wararkeena dambe idiin kugu soo gudbin doonta.
Taliyaha ciidanka Booliska Iswiidhan oo baarlamaanku looga yeeray